युवतीको सेक्स चाहना कसरी थाहा पाउने ? - Indian Girls Nude XXX Images
युवतीको सेक्स चाहना कसरी थाहा पाउने ?
युवा होस् वा युवती बढ्दो उमेरसँगै सेक्स गर्ने इच्क्षा जो कोहीलाई पनि लाग्छ । तर अन्य उमेरमा भन्दा युवा अर्थात यौवन उमेरमा सेक्सको इच्क्षा हुनु स्वभाविक पनि हो । प्रेम सम्बन्धमा रहेकै बेला युवायुवतीले छोटो समयमा नै यो सम्बन्ध कायम गरीहाल्छन् । प्रेमसँगै यसलाईअझ उचाईमा पुर्याएर आफ्नो प्रेमलाई प्रमाणित समेत गर्न चाहन्छन् ।आफ्नो पार्टनरले आफूलाई कस्तो सोच्छ, र उ आफूबाट सन्तुष्ट छ या छैन् सबै जानकारी हासिल गर्नका लागि एक अर्काका इशाराहरू बुझ्नु जरूरी हुन्छ ।
त्यसमा पनि युवतीले कतिबेला सेक्स गर्ने इच्क्षा राख्छिन् र पुरुषले कसरी थाहा पाउने युवतीको इच्क्षा ? उमेर पुगेकी युवती होस् वा कुनै महिला, यदी उनले प्रेमले स्पर्ष गरेको अवस्थामा युवकलाई कामुक नजरले हेरेको खण्डमा त्यो सम्बन्ध प्रेमभन्दा अगाडि अर्थात् सेक्सका लागी आतुर भएको बुझ्नु पर्छ । तर हत्तपत्त युवाहरुले यो कुरा बुझ्दैनन् र यस्तो सुनौलो मौका गुमाउँछन् । त्यस्तै कुनै युवतीले अर्की युवतीको शरिर र कुनै एक अंगको विषेश चर्चा युवकसँग गरे, ती युवती उक्त पुरूषसँग अन्तरंग सम्बन्ध राख्नका लागि तयार भएको संकेत गरेको बुझ्नु पर्छ ।
युवतीले बारम्बार युवकसँग नजिकिने र बोल्ने बहाना खोजिरहेको अवस्थामा रहेको पाइयो भने उनी प्रेमभन्दा माथी उठ्न, चाहेको हुनसक्ने संभावना प्रवल हुन्छ । युवतीले प्रेमका कुरा गरिरहेका बेला यदी कुनै युवतीको आवाजमा कम्पन महसुस भए र उनको गला अवरूद्ध भए, ती युवतीमा यौनइच्छा पलाएको हुन सक्छ र उनी अन्तरंग सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छिन् । सामाजिक सञ्जालमा कुनै युवतीले युवकलाई अश्लिल तस्विरहरू पठाउँछिन् भने पनि ती युवतीको सोच प्रेममा मात्र सिमित नभएको बुझ्नुपर्छ ।
यदी कुनै युवती घूम्नका लागि पार्क या कुनै सार्वजनिक ठाऊँमा जानुभन्दा आफ्नो कोठामा जानका लागि अनुरोध गर्छिन् भने ती युवतीले गरेको इशारा प्रेमभन्दा फरक भएको बुझ्नुपर्छ । यदी उनले नजिकिएर जिस्किने र यस्तै किसिमका अन्य व्यबहार गरेपनि उनको सेक्स झुकाव हो भन्ने मर्दले बुझ्नुपर्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)	March 11, 2015 admin	Posted in Most Demanded	Post Permalink
← nepali girl sex with teacher for marks	Mero wild husband →